Allgedo.com » 2011 » June » 26
Home » Archive Daily June 26th, 2011 Taliye ku xigeenkii Dambi Baarista gobolka Mudug oo xalay la dilay. Jun 26, 2011 Dabley hubeysan ayaa waxay xalay fiidnimadii toogasho ku dileen Taliye ku xigeenkii Saldhiga waqooyiga Magaalada Gaalkacyo Maxamuud C/salaan Cali. Dilkan ayey kooxda wax dishay u geysteen taliyaha isagoo fadhiyey maqaahi ku taala meel saldhiga u dhaw.
Kooxda ayaa ka baxsaday goobta uu falku ka dhacay markii ay falka gaysteen. Taliye ku xigeenka la dilay ee Maxamuud C/salaam Cali ayaa ka tirsanaa saraakiisha... Kalfadhigii la filayay in ay maantay yeeshaan Xildhibaanada Baarlamanka KMG oo dib u dhac ku yimid. Jun 26, 2011 Wararka ka imaanaya caasimada Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maantay uu dib u dhac ku yimid Kalfadhigii la filayay in ay yeeshaan 4-bilood kadib Baarlamanka KMG Soomaaliya.
Xildhibaan C/llaahi Colaad Rooble oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamanka KMG Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaqday kalfadhigii la filayay in ay maantay yeeshaan Xildhibaanada Baarlamanka KMG Soomaaliya si ay cod ugu qaadan... Munaasabada 26-ka June oo laga xusay Madaxtooyo (SAWIRO). Jun 26, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xaflad si heer sare ah loo soo qaban qaabiyey kana soo qeyb galeen Madaxda ugu saraysa dowladda KMG Soomaaliya ayaa xalay ka dhacday Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia, halkaasi oo lagu xusay 26-ka June oo ah maalintii ay Xornimada qaateen Gobolada Waqooyi ee Dalka Soomaaliya.
Madaxda ugu araysa Dowladda KMG ayaa ka dhex muuqday Xafladaasi lagu xusayay 51-guuradii... Radio Allgedo/ Waraysiyo